ဘောလုံးသမိုင်းမှာ မယုံနိုင်ဖွယ် အမြန်ဆုံးကန်ချက်ဖြစ်လာတဲ့ တစ်နာရီ ၁၃၁ မိုင်နှုန်း – Myan Sports
ဘောလုံးသမိုင်းမှာ မယုံနိုင်ဖွယ် အမြန်ဆုံးကန်ချက်ဖြစ်လာတဲ့ တစ်နာရီ ၁၃၁ မိုင်နှုန်း
ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးသမားဟောင်း ရွန်နီဟီဘာဆင်ဟာ ဘောလုံးသမိုင်းမှာ အမြန်ဆုံးကန်ချက်ကို ကန်နိုင်သူလို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။
မိုချန်ဂလတ်ဘတ်နဲ့ ရှော်ကေးတိုက်စစ်မှူးဟောင်း ရက်ဖဲလ်ရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ ရွန်နီဟာ ကြောက်မက်ဖွယ်အားကောင်းတဲ့ ဘယ်ခြေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ရွန်နီဟာ အလွတ်တည်ကန်ဘောတွေမှာ မယုံကြည်နိုင်ဖွယ် အန္တရာယ်ရှိသူဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက စပို့တင်းလစ္စဘွန်းအတွက် ယင်းစွမ်းရည်ကို ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရွန်နီဟာ နေဗယ်အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ အဝေးကွင်းပွဲစဉ် ဒုတိယပိုင်း ၈၈ မိနစ်မှာ အလွတ်တည်ကန်ဘောကနေ ဒုံးပျံလိုအရှိန်မျိုးနဲ့ အပြင်းကန်သွင်းခဲ့ပြီး ဂိုးပိုက်ပွင့်မတတ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသွင်းဂိုးကို တရားဝင်မဟုတ်တဲ့တိုင်းတာမှုတွေအရ ကန်ချက်အားပြင်းမှုဟာ တစ်နာရီကို ၁၃၁.၈၂ မိုင်ရှိတယ်လို့ သိရပြီး အဲဒီအရှိန်နဲ့ နံရံကို ကန်မယ်ဆိုရင် ဘောလုံးကွဲသွားနိုင်လောက်တဲ့အထိ အရှိန်ပြင်းပါတယ်။
Did you know? 🤔 The Brazilian Ronny once blastedafree-kick that was measured at 211 km/h. 💣🚀
🎥 @Bundesliga_EN pic.twitter.com/jccDp3LH5W
— 433 (@433) July 2, 2019
ရွန်နီဟာ နောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်အကြာ ဟာသာဘာလင်အသင်းအတွက် ကစားပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်း အလွတ်တည်ကန်ဘောကနေ ဂိုးပိုက်ပွင့်လောက်တဲ့ကန်ချက်နဲ့ ဂိုးကန်သွင်းခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီသွင်းဂိုးဟာ စပို့တင်းလစ္စဘွန်းအတွက် သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးရဲ့မြန်နှုန်းအတိုင်းပဲ ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်တုန်းက ရီးရဲနဲ့ပွဲစဉ်မှာ အင်တာအတွင် အက်ဒရီယာနိုကန်သွင်းခဲ့တဲ့ ဒုံးပျံလိုသွင်းဂိုးဟာ ပိုက်ပေါက်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် တစ်နာရီကို ၁၀၅ မိုင်နှုန်းသာ ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article မာရာဒိုနာနဲ့ယှဉ်ရင် မက်ဆီရော၊ ရော်နယ်ဒိုပါ အာပလာပဲဆိုတဲ့ ဘင်ဖီကာနည်းပြ
Next Article ကာဗာနီရဲ့ချေပဂိုးအပြီး ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကို သဘောကျနေတဲ့ ပရိသတ်များ